आपराधिक गिरोहले नेपालका कसरी नागरिकता लिइरहेका छन् ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
आपराधिक गिरोहले नेपालका कसरी नागरिकता लिइरहेका छन् ? (भिडियो)
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा नगरिकता दिने विषयमा विभिन्न अन्यौलता छाएको छ । यता नागरिकता कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलबीच आ–आफ्नै धारणा, मत–अभिमत आइरहेको छ । वास्तवमा नेपाली नागरिकतामा किन अन्यौलता देखियो त ?
यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि न्युज २४ टेलिभिजनले आफ्नो नियमित प्रस्तुति ६ प्रश्नमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता प्रेमलकुमार खनालाई निम्त्याएको छ । नियमित प्रस्तुति ६ प्रश्नमा कुराकानी गर्दै नेता खनालले राज्य र नागरिकको सम्बन्धनै वास्तवमा नागरिकता भएको बताउनुभएको छ ।
नेता खनालले भन्नुभयो, ‘राज्यले तोकेको निश्चित मूल्य र मापदन्डका आधारमा नागरिकता पाउन सकिन्छ । नागरिकता पाइसकेपछि नागरिकको कर्तव्य भनेको देशभक्तिपूर्ण, राष्ट्रभक्तिपूर्ण अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’
बंशजको (रगतको नाता, माटोको साइनो) आधारमा नागरिकता दिइनेछ । त्यस्तै कुनै विदेशी आएर देशमा जुनसुकै ब्यवसाय गरिहरेको छ भने पनि विभिन्न मापदन्ड पूरा गरी नागरिकता दिन सकिने नेता खनालले बताउनुभयो ।
आपराधिक गिरोह, शरणार्थी, छिमेकी मुलुकबाट आएका विदेशीहरुले समेत नेपाली नागरिकता लिएको पाइएको नेता खानलले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘यस्तो ब्यक्तिहरु पनि भेटिएको छ कि भारतको पनि नागरिकता भएको र नेपालको पनि नागरिकता लिएका छन्, जसले दोहोरो नागरिकता लिएका छन् । लाखौं–लाखौंले नेपाल र भारत दुवै देशमा भोट दिइरहेका छन् ।’
अझैं पनि नेपाल सरकारले कुन जिल्लामा कति नागरिकले बंशजको आधारमा नागरिकता पाएका छन्, कतिले अंगिकृत नागरिकता पाएका छन् भन्ने जानकारीसमेत सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको नेता खानलले बताउँभयो । टिभी जर्नलिष्ट नवराज चालिसेसंग नेता खनालको कुराकानी विस्तृत अंश भिडियोमा हेर्नुहोस्ः
access_time 9:48 am
काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधामन्त्री इमरान खानले नरेन्द्र मोदीलाई बधाई तथा आगामी कार्यकालका लागि शुभकामना दिएका